Midowga Afrika oo soo dhaweeyay qabsashada Jasiiradda Kudhaa – Radio Muqdisho
Midowga Afrika oo soo dhaweeyay qabsashada Jasiiradda Kudhaa
Ciidamadda xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa AMISOM ayaa Jasiiradda Kudhaa oo ku taala gobolka Jubadda hoose ee koonfurtaa Soomaaliya ka xoreeyay maleeshiyaadka kooxda Nabad diidka ee UGUS kaddib howlgal ay saakay ciidamada halkaas ka sameeyeen.
Kudhaa waxa ay ka mid aheyd goobaha ay maleeshiyaadka UGUS ku xoog ganaayeen iyadoo u aheyd saldhig muhiin ah oo sahayda iyo howlgallada ee koonfurta Soomaaliya ay ka fuliyaan sidoo kale waxa ay kudhaa aheyd goob ay ka dhoofiyaan dhuxusha taas oo horey Dowladda Soomaaliya u mamnuucday.
Ergayga gaarka ah ee Midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya ahna Madaxa AMISOM Amb. Maman Sidikou ayaa u hambalyeeyay ciidammada xoogga dalka iyo kuwa AMISOM guusha ay ka gaareen howlgalkii saakay dib looga xoreeyay Jasiiradda Kudhaa isagoo ku tilmaamay tillaabo lagu adkeynayo Ammaanka shacabka Soomaaliyeed ee ku nool Gobolka Jubada Hoose.
“Magaalada Kudhaa waa goob istiraatiiji ah waxeyna dib u xoraynteeda tahay mid muhiim u ah Ammaanka gobolka Jubada Hoose, waxaana sii wadaynaa baacsiga kooxda Gummaadka shacabka ee UGUS meelkasta oo ka mid ah dalka ilaa laga saaro kooxdaas dalka,”sidaasi waxaa yiri Amb.Sidikou.
Jasiiradaha Mdoa iyo Dagazi waxaa gacanta ku haya Ciidanka xoogga iyo kuwa AMISOM qabsashada kudhaana waxa ay tahay tallaabooyinka cadowga looga fogaynayo Dakadaha muhiimka ah ee Gobolka.
Maalinta Caalamiga ah ee Biyaha oo Muqdisho laga xusay
Danjire Cali Americo oo Deeq Lacageed Gudoonsiiyey Dhibane Soomaaliyeed “SAWIRRO”